Kufarisa kana kutambudzika? | Apg29
Kufarisa kana kutambudzika?
Ndaizofara zvakaipa uye kutambudzika zvakaoma kwatanga, ndichaita pakarepo ndinoparidza kuti uku kuzadziswa ouprofita uye tinofanira vagozofuratira kwaAntikristu, uye tichafanira kutambura zvikuru. Asi kana ndiri kurudyi uye vose anofunga kudaro - kuti Jesu anogona kuuya chero nguva uye uzviite - ipapo avo hatizviparidzi izvozvo hapana mukana kugadzirisa mashoko avo, kuti tinogona kuita.
Faith Vanun'una Nehanzvadzi! Nokuti isu tiri, kana tichitenda kuti Jesu achauya pamberi kana shure kwekutambudzika. Zvakakosha kuti tinoona nayo - ruponeso runotibatanidza kunyange tine maonero akasiyana panyaya iyi.
A nyaya huru kuti chokuita izvi: sei isu kuisa isu kuti izvi zviviri zvokusarudza?
Ndakazvipira Wake vanhu pamberi paJesu anogona kuuya chero nguva - akanga agadzirira kuti!
Avo vanotenda kuti tichava zvose kwaAntikristu uye kutambudzika nezvinetso, anoriona chinokosha kuti tiri aigadzirira.
Vanoona kuti zvandinofunga zvinoreva kuti tiri lulled kuva mamiriro apo isu tisiri kugadzirira kana kwaAntikristu kana kutambura. Zvichida nemiwo kungava kutiza uye yokudavira zvavanoda - zviri zvakaipa.
Zvakanaka Ndine zvichida kupfuura zvimwe dzechiKristu munyika ino akanyevera kuti kana Jesu ari kuuya, tinogona kutarisira kuona kwazvo kutambura muhondo, zvichakupedzerai, apo Russia ine rinokosha .
saka ini akakurudzira kugadzirira kutambura uye dzakaoma, nokudzokorora saka iwe kuwana mvura uye chikafu zvinodiwa.
Izvi zvichange kutambura womunharaunda sedzimwe nyika dzakawanda dzine kwazvo kutambura, nei munyika dzakawanda kure vanhu vaMwari kuponeswa?
Ndingadai pakarepo kuparidza
Izvi hazvifaniri kuvhiringidzwa yokutambudzika pose kuti Ndinofunga isu achapukunyuka. The mubvunzo ndoupi zvakakomba: Kuti kutaura kuti hatigoni kumirira Jesu zvino - kana zvatinokwanisa?
Ndaizofara zvakaipa uye kutambudzika zvakaoma kwatanga, ndichaita pakarepo ndinoparidza kuti uku kuzadziswa ouprofita uye tinofanira vagozofuratira kwaAntikristu, uye tichafanira kutambura zvikuru.
No mukana kururamisa shoko ravo
Asi kana ndiri kurudyi uye vose anofunga kudaro - kuti Jesu anogona kuuya chero nguva uye uzviite - ipapo avo hatizviparidzi izvozvo hapana mukana kugadzirisa mashoko avo, kuti tinogona kuita.
Sheori ndiyo zvino kuti avo vakati kuti zviitiko zvakasiyana kunofanira kuitika pamberi Jesu anodzoka, vave zvinobatanidzwa uye vakabatsira vanhu kwete kumirira Jesu, asi funga zviitiko vachatanga kuitika pamberi achadaro.
Kuchachinja nzira youpenyu, zvenyika, vakabatikana nezvinhu zvavo, kwete kumirira Jesu kana takagadzirira kusangana naye.
Vaya vakabatsira kuti ichi chaizvoizvo ane mafungiro akadaro uye zvakafanana pfungwa sezvo muranda anorondedzerwa se "zvakaipa" Jesu aidzidzisa panyaya kuuya kwake.
Muranda akati mumwoyo make, "Ishe wangu uchatora." Mateu 24: 48th
Ngatiregei kufanana muranda akaipa!
Vecka 22, måndag 27 maj 2019 kl. 05:01